ZAYYA | Just Be. That's Enough!
သာပင် သာခဲ၊ ရွာမစဲဟု
ချစ်ခွန်းတုံ့တင်၊ သို့ အရှင်…။
ကယုကယင်၊ တန်းတင် ပုဆိုး
နှစ်ထပ်ကိုး၍၊ ထပ်ပိုး ကြင်နာ
ထမ်းမြဲ အစဉ်၊ သို့ သခင်…။
ထိုအရှင်သည် ပန်းဝတ်လွှာတို့နှင့် အတူ၊ ဖြတ်သန်းကုန်ဆုံးသွားသော စက္ကန့် မိနစ် ကလေးများနှင့် အတူ၊ ဖြူလွှလွှ ကျဆင်း သက်ရောက် လာတတ်သော နှင်းမှုန်ဖွဲများနှင့် အတူ၊ ပြောင်းလဲ ဖူးပွင့်နေတတ်သော ရာသီတိုင်းတွင် တည်ရှိ၏။ အထူးသဖြင့် ဤရာသီသည် သခင်၏ ရာသီတည်း။
Filed under mood Tagged with 13, Ma
မည်းပြောင်နေတဲ့ ကတ္တရာရောင် လမ်းမကြီးကို နောက်ခံထားပြီး၊ တိတ်တဆိတ် မောင်းထွက်သွားကြတဲ့ ကားကြီး ကားငယ်တွေကို ငေးကြည့်နေမိတယ်။ နို့ … တကယ် မောင်းထွက်သွားသူဟာ ကားတွေလား၊ နို့….. ရှည်လျားလှတဲ့ မည်းပြောင်ပြောင် ဒီလမ်းမကြီးလား၊ ဒါမှမဟုတ် ရပ်နေတယ်လို့ (ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်) ထင်နေတဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လား မကွဲပြားမိ။
တစ်ခါက အဓိပတိလမ်းမကြီးပေါ်မှာ ဆေးလိပ်ပြာခြွေရင်း တွေးမိသလိုမျိုး။ အခြားနေရာမှာ ခြွေတဲ့ ဆေးလိပ်ပြာနဲ့ ဒီမှာ ခြွေတဲ့ ဆေးလိပ်ပြာ၊ ကြွေတာချင်း အတူတူ ဂုဏ်မတူသလိုလို။ စိန်ပန်းပင်ကြီးက ပွင့်နီတွေကြွေတာ မြင်တော့ အခုကြွေတဲ့ ပန်းဟာ အရင်က ကြွေတဲ့ ပန်းထက်ပဲ ပိုဂရုဏာ သက်ရမလိုလို။
တစ်ခါက မှတ်သားခဲ့ဖူးတယ်။ ရုရှားစာရေးဆရာကြီး ဒေါ့စတိုယက်စကီးကို တော်လှန်ရေးအတွင်း ဖမ်းမိတုန်းက။ အကျဉ်းတိုက်ထဲ၊ တိုက်ပိတ် နှိပ်စက်ပုံများ။ အသံဆို ဘာသံမှ မကြားရအောင် အစောင့်တွေတောင် ပိုးခြေအိတ်စီးလို့တဲ့။ ပြတင်း မရှိ၊ အလင်းမရှိ၊ ပကတိ အမှောင်မှာ နှစ်ပေါက်အောင် ချုပ်နှောင်ခဲ့ကြသတဲ့။ ပြင်ပ ပယောဂဆီက ဘာသံမှ မကြားရတဲ့ အဲ့ကာလမှာ သူ ကြားသိနိုင်ဆုံးအသံဟာ သူ့ အသက်ရှူသံရယ်…။ နောက်ပြီး….. သူ့ရဲ့ နှလုံးခုန်သံရယ်။
Filed under mood Tagged with Jean Paul Satre, mood, murakami
ရုရှား၊ အမေရိက၊ အနောက်တလွှားမှာ ခေတ်သစ် ခရစ်ယာန် လို့ သူ့ကိုယ်သူ ခေါ်ပြီး၊ အများက ဆူဖီဆြာရီး အဖြစ် သိကြတဲ့ အာမေးနီးယန်း ဂုရုကြီး တစ်ယောက်။ သူ့အကြောင်း အကျဉ်းလေး မှတ်မိသလောက် ပြောမလို့။
သူ့အဖေက ဂရိလူမျိုး၊ အမေက အာမေနိယန်းလူမျိုး၊ နကိုက အလက်ဇန်းဒရိုပို လို့ ခေါ်တဲ့ အာမေနိယန်း နိုင်ငံရဲ့ အခု ဂျူမရီဒေသမှာ မွေးတယ်။ သူ့အစောပိုင်း ဘ၀မှတ်တမ်းက မရေရာဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သူ့ကို ၁၈၆၆ – ၁၈၇၀ ၀န်းကျင်မှာ မွေးဖွားခဲ့တာ ဖြစ်မယ် ဆိုတဲ့ ခန့်မှန်းချေပဲ ရှိတယ်။ သူ့ရဲ့ နိုင်ငံကူးမှတ်ပုံတင်မှာ ပါတဲ့ မွေးသက္ကရာဇ် ၁၈၇၇ ဆိုတာကလည်း အမှန်မဟုတ်တဲ့ အပြင်၊ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း သူ့မွေးနေ့ကို ဘယ်တုန်းကမှ ထုတ်မပြောခဲ့ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် မသေချာဘူး။
ငယ်ဘ၀နဲ့ ပတ်သက်လို့ – အာရှနဲ့ အာဖရိက မြောက်ပိုင်းဒေသတွေ ခရီးသွားခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ အမှတ်အသား အချို့ပဲ ရှိတယ်။ ဒါလည်း ခန့်မှန်းအားဖြင့်ပဲ။ တိဗက်၊ သီရိလင်္ကာ၊ အိန္ဒိယ၊ အနောက်ဘက် အီဂျစ်၊ စသည်။
သူ့ကို မှတ်တမ်းအားဖြင့် စသိရတာက ၁၉၁၂ မော်စကိုမှာ။ သူ့အယူအဆတွေ သင်ကြားတဲ့ သူ့ဂိုဏ်းအဖြစ်နဲ့ စပြီး လူရှေ့ထွက်လာတာ။ ဒါပေမယ့် ဂုဂျိယဖ်က သူ ဘာမှ အသစ်အဆန်း သင်ပေးနေတာ မဟုတ်ဘူးလို့ အမြဲငြင်းဆန်လေ့ရှိတယ်။ ရှေးဟောင်း တိမ်မြုပ်နေတဲ့ သစ္စာရှာပုံတော် နည်းနာတွေကို ကနေ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ချပြတာ သက်သက်ပဲ လို့ ဆိုတယ်။
Filed under Gurdjieff Tagged with ဂုဂျိယဖ်, ဂန္ဓာရီ, အော့စပန်းစကီး, Beelzebub, Fourth Way, Gurdjieff, miraculous, Ouspensky, tertium organum, views
အိမ်မက်များ အဘယ်ကြောင့် အရေးပါ ရပါသနည်း ( နိဒါန်း )
စာမကွဲသော်လည်း ဖတ်နည်းကွဲက - အသိကွဲ၏